Dhallinyarada Baarlamaanka Afrika (AYP) oo ugu Baaqay Midowga Afrika iyo QM inay Xushmeeyaan Madax-bannaanida Somaliland – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dhallinyarada Baarlamaanka Afrika (AYP) oo ugu Baaqay Midowga Afrika iyo QM inay...
Dhallinyarada Baarlamaanka Afrika (AYP) oo ugu Baaqay Midowga Afrika iyo QM inay Xushmeeyaan Madax-bannaanida Somaliland
Dallada Dhallinyarada Baarlamaanka Afrika (AYP) ayaa shaaciyey inay ka shaqeynayaan sidii Jamhuuriyadda Somaliland loogu aqoonsan lahaa dal madax-bannaan.
Dalladan oo lagu aasaasay Kenya sannadkii 2003dii islamarkaana ay ku jiraan dhallinyarada Afrika ee 54ka dal ee xubnaha ka ah Midowga Afrika, ayaa war-murtiyeed ay soo saareen waxay ku caddeeyeen inay Somaliland u ogolaadeen inay xubin ka noqoto Dallada ay ku bahoobeen.
Wakaaladda Wararka Somaliland ee SOLNA, ayaa soo xigatay warmurtiyeedka dhallinyarada Baarlamaanka Afrika oo u ololeeya nabadeynta, horumarka iyo dimuqraadiyadda dalalka Afrika, waxaanu War-saxaafadeedkoodu ka dambeeyey kadib markii wefti ka mid ahi ay booqasho ku yimaadeen Somaliland dabayaaqadii Bishii November ee la soo dhaafay, waxaanay xaqiijiyeen maadaama oo ururkooda ay ku jiraan 54ta waddan ee Afrika ay haatan Somaliland noqon doonto dalka 55-aad ee xubinta ka noqda.
Waxa kaloo, dallada dhallinyarada baarlamaanka Afrika ay intaas ku dartay inay Somaliland ahayd qaran madax-bannaan oo soohdimihiisa leh isla markaana xornimadiisa ka qaatay 26kii June 1960kii dalka Ingiriiska.
Dallada AYP waxa ay ugu baaqday Midowga Afrika iyo Qarammada Midoobay inay xushmeeyaan soohdimaha iyo madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland. waxa kaloo ay u soo jeediyeen dalalka Afrika inay xidhiidh dhaqan-dhaqaale la yeeshaan Jamhuuriyadda Somaliland.
Sidoo kale dhallinyarada Baarlamaanka Afrika waxa ay maalgashadeyaasha caalamiga ah ku booriyeen inay maalgashadaan Jamhuuriyadda Somaliland isla markaana ay la yeeshaan xidhiidh ganacsi.
Dhallinyarada Baarlamaanka Afrika waxa ay warmurtiyeedkooda ku balanqaadeen inay sii wadayaan taageeradooda la xidhiidha sidii Somaliland ay qaddiyadeeda ugu heli laheyd garowshiiyo sharciya, iyadoo la tixgelinayo madax-bannaanidii ay qaadatay 26kii June ee sannadkii 1960kii.
Berbera oo laga dareemayo soo dhaweynta ahmed shide